နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ မစ္စတာရမ်နက်သ်ကိုဗင့် - Yangon Media Group
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ မစ္စတာရမ်နက်သ်ကိုဗင့်
နယူးဒေလီ၊ ဇန်နဝါရီ၂၇- နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၇ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁ဝ နာရီ တွင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ရမ်နက်သ်ကိုဗင့်ဒ်အား နယူး ဒေလီမြို့ရှိ သမ္မတအိမ်တော်(Rashtrapati Bhavan)၌ သွားရောက် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံ ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုး မြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူအချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမြှင့်တင်ရေး၊ နှစ် နိုင်ငံအကြား ဆောင်ရွက်နေသည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု အခြေခံအ ဆောက်အအုံစီမံကိန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စ၊ လယ် ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၊ လူ့စွမ်း အား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကဏ္ဍနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍများတွင် ပိုမိုနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပါဝင်ကူညီရေးကိစ္စရပ်များ ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန် လည်သင့်မြတ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုလုပ် ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား ပြီး အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတအနေ ဖြင့်အဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံသို့လာရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ သည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နယူးဒေလီ မြို့မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပြန်လည် ထွက်ခွာရာ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ကျန်း မာရေးနှင့် မိသားစုဘဝဖူလုံရေးဝန် ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mrs. Anupriya Patel၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင် ရာအိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော် အောင်နှင့်ဇနီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) စစ်သံမှူး ဗိုလ် မှူးချုပ်သိန်းဇော်နှင့် မြန်မာသံရုံး၊ စစ်သံရုံးတို့မှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ နှင့်တာဝန်ရှိသူများက Palam လေတပ်စခန်းလေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ် ဆက်ကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့သည် ညနေ ၅ နာရီခွဲ တွင် နေပြည်တော်သို့ပြန်လည်ရောက် ရှိရာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦး ကျော်တင့်ဆွေ၊ နေပြည်တော်ကောင် စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးအောင်နှင့်ဇနီး၊ သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမင်း သူနှင့် တာဝန်ရှိသူများက နေပြည် တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ပြညောမှေအနေ ဃသကညျနူသမ
မြောက်ဦးတွင် တိုက်ပွဲများကြောင့် ပြည်သူများ ထိခိုက်မှု၊ အသက်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ယဉ်ကျေးမ
လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတားအနီးတွင် ကုမ္ပဏီကားတိမ်းမှောက်၊ ယာဉ်မောင်းစိုးရိမ်ရ
လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သည့် အတိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေဖြင့် အပြည့်အဝ မဆောင်ရွက်နိုင်သည်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နှင့် ၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိမှု အခြေအနေများ အပေါ် ဒီ??